Efa nambarako ary hamafisiko hatrany fa tsy mifidy firenena, tsy mifidy saranga ity valan’aretina ity ary mihazakazaka ny fitombony, saika isan’ora sy isan-tsegondra mihitsy raha ny tarehimarika ofisialy mivoaka maneran-tany no arahina akaiky. Efa 185.067 no voalaza fa mitondra ilay tsimok’aretina maneran-tany ary efa maherin’ny 7330 ny maty na dia efa 80 236 aza no sitrana.
Fitaovana ara-dalàna manaraka ny fenitra iraisam-pirenena io fitaovana fitiliana io ary efa nahazo ny fankatoavan’ny OMS. Noho izany, ireo olona rehetra miditra eto an-tanindrazana na efa niditra teto an-tanindrazana tao anatin’ny herinandro izay dia hatao fitiliana avokoa.
Mangataka ny fiaraha-mientan’ny tsirairay hitombo fitandremana, hanaraka an-tsakany sy andavany ny fandaminanana apetraka.
Maison Centrale d’Antanimora : pour l’humanisation de l'univers carcérale à Madagascar
Le Président Andry Rajoelina a effectué une descente à la Maison…